Umgangatho wezixhobo ezihambelana nekhaya, ezixhaswa yiApple, ziya kufumaneka ngasekupheleni kuka-2021 | Ndisuka mac
Umgangatho wezixhobo ezihambelana nekhaya, ezixhaswa yiApple, ziya kufumaneka ngasekupheleni kuka-2021
IKhayaKit yisahlulo seApple ekwenziweni kweeprotocol kunye nezixhobo zokwenza ikhaya labasebenzisi ngakumbi kwaye likrelekrele ngakumbi kwaye likwazi ukuzimela. Iinkampani ezininzi zenkampani yesithathu zikhupha izixhobo ezihambelana neKhayaKit. Asinguye wonke umntu onayo yonke into evela kwiApple. Kungenxa yoko le nto sifuna ukufezekisa umgangatho osebenza nawo onke amaqonga. Kungoko iprojekthi ye-CHIP Ixhaswe yiApple enokubona ukukhanya kwemini kamva kulo nyaka.
IKhayaKit yey Apple. Nangona kunjalo, iAmazon ineprojekthi yayo efana neGoogle. Abasebenzisi banokusebenzisa nayiphi na okanye zonke kodwa azingqinelani, okwenza ukuba kube nzima ukukhetha. Kungenxa yokuba into esiyifunayo ayisoloko iyinkampani esingathanda ukuba ibe yiyo. Umanyano kunye nolungelelwaniso lukhona. Kungenxa yoko le nto iprojekthi ye-CHIP yenziwe ekupheleni kwe-2019. I-Apple kunye neAmazon, uGoogle kunye noManyano lweZigbee ubhengeze izicwangciso zokuphucula umgangatho weemveliso zekhaya ezi-smart, usebenzisa iiprotokholi ezikhoyo ezinje ngeKhaya laseKhaya le-Apple, iAmazon Alexa kunye neGoogle's Weave.
Le projekthi ijolise ekwenzeni kube lula kubavelisi besixhobo ukwakha izixhobo ezihambelana neendlela ezahlukeneyo zamaqonga asekhaya kunye nabancedisi belizwi, ngokuchaza iseti ethile yetekhnoloji yenethiwekhi esekwe kwi-IP yokuqinisekiswa kwesixhobo. Umgangatho omtsha ovulekileyo izakusekelwa kwi-Wi-Fi, iBluetooth LE kunye ne-Thread Ukucwangciswa kwesixhobo kunye nokunxibelelana.
Njengoko ipapashiwe kwi Verge, kwaye ndiyabulela kwisemina ekwi-Intanethi yeZigbee Alliance, iinkampani ezithatha inxaxheba kule projekthi Baza kuba nakho ukufumana izixhobo eziqinisekisiweyo ukusuka esiphelweni se-2021. Umgangatho uya kufumaneka kwiindidi ezininzi:
Iingubo ze iifestile
Abayilibali i izixhobo ezindala kunye neqonga liyakwenziwa ukuze lihambelane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Umgangatho wezixhobo ezihambelana nekhaya, ezixhaswa yiApple, ziya kufumaneka ngasekupheleni kuka-2021
I-Apple kufuneka ivale iMicrosoft Apple Store kwakhona ngenxa yesifo